अनलाइन पत्र संवाददाता	 प्रकाशित मिति २८ असार २०७७, आईतवार १७:०५
सामान्य रूपमा कुनै क्षेत्रमा ज्ञान, सीप हासिल गरेको आफ्नो जीवनमा उपयोगी हुने, आफ्नो जीवनलाई सार्थक ढंगबाट अगाडि बढाउनको लागि दक्षता प्राप्त गरेको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ । आजको समयमा सबै जस्तो व्यक्तिले सामान्य शिक्षा त प्राप्त गरेको छ तर प्राविधिक शिक्षा भने केही व्यक्तिले मात्र प्राप्त गरेको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने हो भने कोहि व्यक्ति बेरोजगारी जस्तो डरलाग्दो समस्याको चपेटामा पर्नु पर्दैन्थ्यो ।
मानिसहरूले ज्ञान हाँसिल गरि डिग्री पुरा त गरेका छन् तर त्यसको प्रमाण दराजमा थुपारेर राख्नु सिवाय कुनै विकल्प देखिदैन । रोजगारीको लागि त्यो प्रमाण बोकेर ढोका–ढोका ढकढक्याउदा पनि रोजगार पाउलान् भन्न सकिन्न । त्यो शिक्षा कागजको पन्नामा मात्र सिमित छ । सरकारी रोजगारको लागि क्षमता प्रदर्शन गर्न खोज्यो भ्रस्ट्रचार ले किला जमाएको छ । “जस्को शक्ति उसको भक्ति“ जस्तो भएको छ । यहाँ घुस खुवाएर जो अगाडि बढ्यो त्यही व्यक्ति मात्र शिखर तथा भ¥याङ चढ्ने हो बाँकी त त्यही भ¥याङ मुनि बसि माथि टुप्पोमा पुग्ने सपना देख्ने हो । भन्न त हाम्रा वीर गोर्खाली पृथ्वीनारायण शाहले “घुस लिन्या र दिन्या पाप हो “भनेका थिए तर के गर्ने यो महत्वपूर्ण भनाई इतिहासको पन्नामा मात्रा सीमित छन । त्यसकारण त्यस्ता शिक्षा क्षेत्रको बेरोजगारी हटाउने हो भने हामीले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ ।
हाम्रो आजको नेपाली समाजमा प्राविधिक शिक्षाको अत्यन्तै महत्व रहेको छ । प्राविधिक शिक्षाले मानिसलाई आत्माबल सिर्जना गर्नमा मदत गर्छ । जसले प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गरेको छ त्यो व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान प्रयोग गरि जिविकोपार्जन सजिलै गर्न सक्दछन् । आफुले व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छन् । सबैलाई त्यसको महत्व बुझाई जनचेतनाको स्रोत बन्न सक्छन् । हाम्रा कतिपय नेपाली युवा हातमा डिग्रीको प्रमाण बोकि बिदेशी भुमिमा गरेर रगत पसिना बगाउन बाध्य भएका छन् । यदि उनीहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको ज्ञान भए आफ्नै देशमा केहि काम त गर्थे होला ? आफ्नै देशको माटोमा पसिना बगाई माटो रसिलो बनाउथे होला ?
हामीभन्दा कति साना–साना देशहरु विकासको सिढी चढिसके । त्यसको मुख्य कारण भनेको आजको नयाँ प्रविधि र आधुनिक शिक्षा हो । अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत, जापान, जस्ता देशले धेरै अघि नै प्रविधि र साधनको प्रयोग गरि सकेका छन । यी देशहरुले आज प्रविधिको दुनियाँमा विश्वलाई नै हल्लाएको छ । सूचना र संचार प्रविधिमा पनि सबैलाई उच्छिनिसकेका छन् । चीनले एउटा पुल केही घन्टामै बनाइदिन्छ । त्यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित चीनले १० दिनमा नै स्तरीय १,००० बेडको अस्पतालको निमार्ण सुचारु गरेर प्राविधिक शिक्षाको रुपमा एउटा उदाहरण बनेको छ । अमेरिका, जापान जस्ता विकसित देशहरुल विभिन्न प्रकारका काम गर्ने रोबर्ट बनेका छन भने नयाँ नयाँ मानवीय विलासिताको वस्तुहरु केहि घण्टा मै सम्पन्न गरेका छन् । यसरी प्रविधिको उचित प्रयोगले आज विश्वलाई नै एउटा गाउँ बनाउन सम्भब भएको छ । मानिसले प्रविधिको प्रयोग गरि चन्द्रमामा पाइला टेकेका छन् । कम्प्युटरले मानिसले गर्न नसक्नी काम पनि सेकेन्ड मै गर्दछ । यी सबै प्राविधिक शिक्षाको देन हो ।
नेपालको कतिपय ठाँउमा मानिसलाई प्रविधिक शिक्षाको ज्ञान नै छैन तर, नेपालमा भने डिग्रीको प्रमाण हुने पनि बेरोजगार छन् । नेपाललाई जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनिन्छ यहाँ ८३,००० मेगावाट जलविद्युत् निकाल्न सक्ने क्षमता छ तर अहिले सम्म ११०० मेगावाट बिद्युत पनि निकाल्न सकेको छैन । यसको सबैभन्दा ठुलो कारण भनेकै देशका युवामा प्राविधिक शिक्षाको कमि हो । त्यसैगरी नेपाललाई कृषि प्रधान देश पनि भनिन्छ तर खै कृषि उत्पादनमा जोड भएको? खै कृषिमा देश आत्मनिर्भर बन्न सकेको? देशलाई आवश्यक पर्ने सियो तथा नुन देखि बहुमुल्य सुनसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ ।
हाम्रो नेपालमा विभिन्न प्रकारका बहुमुल्य बस्तुहरु उत्खनन गर्न पाएको छैन जसको कारण प्राविधिक शिक्षाको कमि नै हो । विदेशका मानिसले एक देशमा बसेर अर्को देशमा युद्ध गर्नका लागि विभिन्न प्रविधिको विकास गरिसकेको छ । मिसायल, आणविक हतियारहरु आकाशबाट नै छोडने गर्छन् तर नेपालले भने केही गर्न सकेको छैन । कृषि कार्यमा भने हाम्रो देशले केहि उदाहरणीय कार्य भएको पाइन्छ । कृषि कार्य गर्नका लागि धान रोप्ने मेसिन, काट्ने तथा झार्ने सबैको विकास भैसकेको छ । जसको श्रेय मात्र प्राविधिक शिक्षालाई हो । त्यसकारण नेपालीलाई पनि अरु देशको दाजोमा पु¥याउने हो भने प्राविधिक शिक्षामा आएको कमिलाई हटाउनु आवश्यक छ । हाम्रा सरकारका अङ्गहरु सक्रिय हुनुपर्छ । सबै निजी तथा सरकारी बिद्यालयहरुमा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ तब मात्र नेपालको भविस्य उज्यालो छ । मानिससंङ प्राविधिक शिक्षाको ज्ञान छ भने उसले बेरोजगारीको समस्या भोग्नुपर्दैन त्यही प्रविधिको प्रयोग गरि आफ्नो जीवन निर्वाह र आर्थिकोपार्जन गर्न सक्छन । “हे सरकार ! कता छ हजुरहरुको ध्यान किन छैन नेपाली जनतालाई प्राविधिक शिक्षाको ज्ञान ।” भन्ने कुरालाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण रुपमा सरकारले चिन्तन गर्नुपर्दछ । त्यसैले हाम्रो देशमा प्राविधिक शिक्षा नै आजको आवश्यकता हो ।
लेखक : बिनिसा खत्री
फोन गर्दा कोभिड-१९ को सूचना दिने आवाज कसको हो
नेपालमा थप ८२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण